सफा तार सतहहरू महत्त्वपूर्ण छ जब यो वायर आरी र हीरा तार आरीको लागि आउँदछ। केवल सफा, राम्रोसँग मर्मत तारहरूले सटीक कटौतीहरू उत्पादन गर्दछ (उदाहरणका लागि, सिलिकॉन वेफर, सेमीकन्डक्टरहरू, खनिज र ढु stones्गाहरू) उत्तरहरू उच्च दक्षता र गुणवत्ता प्रदान गर्दछ। अल्ट्रासोनिक इनलाइन तार आरा सफाई एक निरन्तर इनलाइन प्रक्रियामा तार आरा सफा गर्नको लागि उच्च प्रविधि हो जसले इष्टतम कटिंग प्रदर्शनको लागि स्थायी रूपमा ताजा सफा तारहरू सुनिश्चित गर्दछ।
अल्ट्रासाउन्डको साथ तारहरू काट्ने र काट्ने सफा गर्दै
अर्धचालक बोर्ड र सिलिकॉन वेफरको उत्पादनका साथै अन्य उद्योगहरूमा आवेदन काट्नका लागि, तार आरी र काट्ने तारहरू व्यापक रूपमा वेफरलाई पातलो प्लेटमा काट्न प्रयोग गरिन्छ। यी काताउने र काट्ने तारहरू (उदाहरणका लागि, हीरा तार आरी, अन्न तार आरी) राम्रोसँग कायम राख्नुपर्दछ र इच्छित कटिंग सटीकता र दक्षता प्राप्त गर्न दूषित पदार्थबाट मुक्त हुनुपर्दछ। यसबाहेक, सफा धुरा वा काटनेको तारले मात्र काटिएको सामग्रीमा खराबी र क्षति रोक्दछ।
अल्ट्रासोनिक सफाई उच्च प्रदर्शन, कम आवृत्ति अल्ट्रासाउन्ड तरंगहरू को प्रयोग गरेर, जसले गम्भीर अशान्ति र ध्वनिक गुहिकाको कारण गर्दछ, अन्तहीन सामग्रीको निरन्तर सफाईको लागि अत्यन्त विश्वसनीय प्रविधिको रूपमा स्थापित गरिएको छ।
हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्सको तार सफा टेक्नोलोजीले पानीको बाथमा निरन्तर प्रक्रियामा विशेष डिजाइन गरिएको सोनोट्रोड (अल्ट्रासोनिक प्रोब वा सी horn) को माध्यमबाट केन्द्रित अल्ट्रासाउन्ड लागू गर्दछ। काट्ने वा काखीएको तार अल्ट्रासाउन्ड प्रेषण गर्ने सोनोटरडको साथ धेरै निकटतामा निर्देशित हुन्छ जसको साथै तीव्र cavitation तातो क्षेत्र पार गर्दछ। अल्ट्रासोनिक Sonotrode मार्फत उच्च आयाम र फोकस गरिएको Sonication उच्च दक्षता सुनिश्चित गर्दछ र टाढाबाट अल्ट्रासोनिक सफाई ट्या ex्कहरू पार गर्दछ। (अल्ट्रासोनिक सफा स्नान र ट्याks्कमा cavitation को अभाव को बारे मा र अधिक पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!) Sonotrode मुनिको cavitational तातो क्षेत्र गहन अशान्ति, कतरनी तनाव, उच्च दबाव र तापमान र सम्बन्धित भिन्नता साथै तरल जेट्स द्वारा चित्रण गरिएको छ। यी तीक्ष्ण शक्तिहरूले काट्ने तारहरूबाट धुलो, फोहोर र दूषित कणहरू हटाउँछन् र पानीको स्नानमा उनीहरूमा तितरबित गर्दछन्, जहाँ कणहरू बाहिर फ्याँकिन्छन्।
अल्ट्रासोनिक इनलाइन सफाई प्रणालीको टेक्निकल स्कीम तार आरा मेशिनमा एकीकृत
दुई अल्ट्रासोनिक ट्रान्सड्यूसरको टेक्निकल ड्राइंग UIP1000hdT एक हीरा तार आरी को लगातार सफाई को लागी।
अल्ट्रासोनिक्सको साथ तार आरा र काट्ने तारहरूको सुधार गरिएको
हिल्सचरको अल्ट्रासोनिक सफाई टेक्नोलोजीले उद्योगहरूलाई तार सुधार गर्दछ जुन उदाहरणका लागि हेर सुधार गर्छ (उदाहरणका लागि, हीरा तार काट्ने) – सेमीकन्डक्टर र फोटोभोल्टिक उद्योगमा वेफर काटने सहित। अल्ट्रासोनिक काभेटेशन द्वारा, कुनै पनि काट्ने तारहरू जस्तै हीरा-गर्भित तारहरू धेरै कुशलतापूर्वक सफा गरिन्छन्। अर्कोतर्फ, क्लिनर काट्ने तारहरूले क्लीनर काट्छ। त्यहाँ उच्च उत्पादन गुणस्तर र कम उत्पादनको समयमा अस्वीकार दरहरू प्राप्त गरिन्छ। अर्कोतर्फ, गहन रूपमा सफा गरिएको तार उच्च काटने फ्रिक्वेन्सीमा संचालन गर्न सक्षम छ, जसले छिटो काटने र अधिक कुशल प्रणाली उपयोगको साथै उत्पादन क्षमताको उच्च स्तरको लागि अनुमति दिन्छ।
फोटोवोल्टिक र सेमीकन्डक्टर उद्योगमा, वेफर काटने मुख्यत: हीरा तारहरू उनीहरूको उच्च काटने क्षमता र दक्षताका साथै यसको घर्षण प्रतिरोध क्षमताको कारण प्रयोग गरिन्छ। सिलिकॉन वेफर (जस्तै मोनोक्रिस्टलिन सिलिकॉन) जस्ता सामग्रीहरू काट्ने एक मेकानिकल बिछोड प्रक्रिया हो, जसले घर्षण र तातोको कारण गर्दछ। घर्षण र भौतिक पोशाकको कारण, धुलो र मलबेजस्ता कणहरू काट्ने तारको सतहमा रहन्छन्। यस्तो दूषित परिणामले सटीक कटौती, सतहमा क्षति र दोषहरू निम्त्याउँछ।
अल्ट्रासाउन्ड धातु भागहरु सफा मा यसको क्षमताहरु को लागी राम्रो गरी जानिन्छ। त्यहाँ दुई कार्य सिद्धान्तहरू छन्। सर्वप्रथम, सफाई तरलको आफैंमा एक दोहोरोपन छ जुन भागहरू सफा गर्न सम्बन्धमा तरलको एक चालको कारण गर्दछ। दोस्रो - र अधिक महत्त्वपूर्ण - उच्च आयामको कारण क्याभेटेसन हो। यी दुबै अल्ट्रासोनिक्स प्रभावहरूले अन्तहीन सामग्रीको गहन र भरपर्दो सफाई उत्पन्न गर्दछ।
अल्ट्रासोनिक तार देखा सफाई को लागी आदर्श हो:
अन्तहीन तार आरा
अन्तहीन लूप तार आरी
परस्पर क्रिया तार आरी
उच्च गति काटने तारहरु
हीरा लेपित तार आरी
अन्न तार आरी
पारस्परिक तार घुमाउने
बिभिन्न तार व्यासका लागि
अल्ट्रासोनिक उच्च प्रदर्शन ट्रान्सड्यूसर UIP1000hdT (१kW, २०kHz) तार सफा गर्नुको लागि
अल्ट्रासोनिक तार आरा सफा किन?
कालो र साना केपीआरपी (अर्थात्, आरा कटटका चौडाई) को कारण उद्योगमा कालो र काट्ने तारहरू व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। जे होस्, काट्ने यो शुद्धता प्राप्त गर्न, तार प्रदूषणबाट मुक्त हुनुपर्दछ किनभने कुनै सतह अपूर्णताले कटमा त्रुटिहरू निम्त्याउन सक्छ। दूषितहरू प्रायः काट्ने प्रक्रियाबाट परिणाम हुन्छ, जसले तार आरीको निरन्तर सफाई आवश्यक गर्दछ।
तार आरा सफा गर्ने प्रक्रियालाई (उदाहरणका लागि, हीरा-गर्भवती काट्ने तार, उच्च-सटीक तार आरी) तार आराको सतहलाई क्षति नगरी प्रभावकारी सफाई आवश्यक पर्दछ। कुनै पनि तीखोपन को हानि को प्रभावकारी रूपमा धुलो र गन्दै हटाउँदा बेवास्ता गर्नै पर्छ।
अल्ट्रासोनिक इनलाइन सफाई सटीक तार आरीको लगातार सफाईको लागि उत्तम समाधान हो। हिल्सचर अल्ट्रासोनिक इनलाइन सफाई प्रणालीले सम्पर्कमा कम र अझै कडा मेकानिकल सफाईमा धुलो र धूलो हटाउँछ। अल्ट्रासोनिक इनलाइन सफाइको कार्य सिद्धिको तारहरू जस्ता अन्तहीन सामग्रीहरू सफा गर्ने ध्वनी cavitation को घटना मा आधारित छ। हिल्सचर अल्ट्रासोनिक इनलाइन सफाई प्रणालीले विशेष रूपले डिजाइन गरिएको सोनोट्रोड सुविधा दिन्छ, जुन पानीको बाथमा राखिएको हुन्छ। काट्ने तारले निकटतामा Sonotrode पार गर्दछ। सोनोट्रोड सफा पानी नुहाउने क्रममा ध्वनिक गुहिका उत्पन्न गर्दछ। पानीको स्नानले फोहोर कणहरू टाढाबाट धपाउँछ; कणहरू वैकल्पिक रूपमा उपलब्ध बेल्ट फिल्टर प्रयोग गरेर फिल्टर गर्न सकिन्छ।
कसरी अल्ट्रासोनिक Cavitation प्रयोग गरेर सफाई काम गर्दछ?
ध्वनिक काभेटेशन तीव्र कम्पनहरू, उच्च तापक्रम र दबावहरू र सम्बन्धित भिन्नताका साथै कतराहरू र तरल जेटहरू द्वारा विशेषता हो। यी गहन गुरुत्वाकर्षण शक्तिहरूले काटनेको तार सतहबाट धुलो र फोहोर हटाउँदछन् जसले निरन्तर उच्च काटने दक्षता र सटीक बनाउँदछ।
सम्पर्क-कम सफाई: तार आरा घर्षण सफाई उपकरणहरूसँग सम्पर्कमा छैन, तर अल्ट्रासोनिक उत्तेजित पानीले सफा गरेको छ। यसैले, हिल्सचर अल्ट्रासोनिक सफा टेक्नोलोजीले तार सतहको कुनै पनि विनाशलाई रोक्दछ।
हिल्सचर अल्ट्रासोनिक सफा काटने तार र तार आरा को लाभ
उच्च प्रदर्शन सफाई
गैर विनाशकारी प्रक्रिया
दक्ष धुलो र फोहोर हटाउने
निरन्तर सफाईको लागि इनलाइन
खाली स्थान स्थापना
बलियो र विश्वसनीय
सरल स्थापना र रेट्रो फिटिंग
म किन अल्ट्रासोनिक इनलाइन सफाई प्रयोग गरेर मेरो तार आरा सफा गर्नुपर्छ?
निरन्तर इनलाइन मोडमा कुशल र गहन सफाईको कारण, काट्ने सटीक र गुणस्तरमा सुधार आएको छ:
अधिक सटीक काट्ने, उदाहरण: पातलो वेफरहरूको लागि
preciser कटौती कम बेकारमा परिणाम
छिटो काटनेको गतिले प्रत्येक तार आरा मेसिनले उच्च उत्पादन क्षमताको लागि अनुमति दिन्छ
सुधारिएको वेफर सतह
काटनेको तार / तार आरा को लामो जीवन चक्र
कुनै पनि उत्पादन मा कुनै पनि पैमाने मा सबै सामग्रीका लागि उपयुक्त
हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्सको उच्च प्रदर्शन ईन्लाइन सफाई प्रणाली
आवश्यक सफाईको तीव्रतामा निर्भर गर्दै, हिलस्चरले विभिन्न अल्ट्रासोनिक शक्तिसँग अल्ट्रासोनिक ट्रान्सड्यूसर प्रदान गर्दछ (उदाहरणका लागि 200W प्रणाली UP200St वा 1kW अल्ट्रासोनिकेटर UIP1000hdT) कुनै पनि प्रकारको तार आरा मेशिनहरूमा एकीकरणका लागि। हिल्सचर उच्च प्रदर्शन अल्ट्रासोनिक ट्रान्सड्यूसरले औद्योगिक ग्रेड पूरा गर्दछ, २ 24/7/365 operation अपरेशनका लागि निर्माण गरिन्छ र अन्तहीन तारहरूको निरन्तर सफाईका लागि भारी शुल्क सर्तमा कठिन वातावरणमा भरपर्दो रूपमा चलाउन सकिन्छ।
बहुमुखी र ह्यान्डल गर्न सजिलो भएकोले, हिल्सचर अल्ट्रासोनिक ट्रान्सड्यूसरहरू विभिन्न कोण र साना स्थानहरूमा माउन्ट गर्न सकिन्छ। तपाईंको मागहरू पूरा गर्न मानक प्रणालीहरू साथ साथै अनुकूलित अल्ट्रासोनिकेटरहरू उपलब्ध छन्।
OEM को रूपमा अल्ट्रासोनिक सफाई मोड्युलहरू
के तपाईं तार आरा प्रणालीहरूको निर्माता हुनुहुन्छ र हिलस्चर अल्ट्रासोनिक्स इनलाइन सफाई मोड्युलहरू एकीकृत गर्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो आर संग सम्पर्क राख्नको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्&विशिष्ट टोलीका बारे छलफल गर्न D टीम। चाहे तपाईं साना स्थानहरूमा स्थापनाको योजना गर्नुहुन्छ वा अवस्थित तार आरा प्रणालीहरूमा रेट्रो फिटिंग, हाम्रो हिल्सचर सफाई मोड्युलहरू तपाईंको आवश्यकताहरूसँग मेल खान्छ।
अब हामीलाई सम्पर्क गर्न तलको फारम प्रयोग गर्नुहोस्! हाम्रो लामो समय अनुभवी कर्मचारीहरु तपाइँको सफाई आवश्यकताहरु छलफल गर्न खुशी हुनेछ! हामी तपाईंलाई हाम्रो अल्ट्रासोनिक इनलाइन सफाई प्रणाली, उनीहरूको स्थापना र मूल्यहरूको बारेमा गहन जानकारी दिन खुशी हुनेछौं।
एक तार आरा भनेको काँटीका लागि धातुको तार वा केबल प्रयोग गर्दछ। तार आरेले काम गर्ने सिद्धान्त प्रयोग गर्दछ जुन ब्यान्ड आरी वा reciprocating आरी जस्तै छ, तर यसको विपरीत विन्डको दाँत वा reciprocating आरी तिनीहरूले सामग्री काट्न घर्षण प्रयोग गर्दछ। विशिष्ट काटि applications अनुप्रयोगहरूमा निर्भर गर्दै, तार आरालाई हीरा कण वा हिरा धुलोको साथ लेप गर्न सकिन्छ घर्षणको रूपमा काटने दक्षता बढाउन र तीब्र काट्ने किनारहरू प्राप्त गर्न।
औद्योगिक प्रयोग र अनुप्रयोगहरू: औद्योगिक अनुप्रयोगहरूको लागि, प्राय: तार र निरन्तर प्रकारको काट्ने आरी प्रयोग गरिन्छ। विशिष्ट अनुप्रयोगहरूमा सेमीकन्डक्टर र फोटोभोल्टाइकको उत्पादनको लागि सिलिकन वेफरहरू काट्ने समावेश छ। हीरा-लेपित तार आरी प्राय: मेसिन पसलहरूमा धातुका भागहरू काट्न पाइन्छ।
हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्सले उच्च प्रदर्शन अल्ट्रासोनिक होमोजाइनाइजर उत्पादन गर्दछ ल्याब लाई औद्योगिक आकार।